Tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း: မလေးရှားရောက်ရှမ်းမျိုးချစ်များ ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် ရှမ်းခေါင်းဆောင်များ လွှတ်မြောက်ရေးအတွက် မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပွဲကျင်းပ
မလေးရှားရောက်ရှမ်းမျိုးချစ်များ ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် ရှမ်းခေါင်းဆောင်များ လွှတ်မြောက်ရေးအတွက် မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပွဲကျင်းပ
နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့် နှစ်ရှည်လများ ထောင်ကျခံနေရသော ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် ရှမ်းခေါင်းဆောင်များ လွှတ်မြောက်ရေးအတွက် မလေးရှား နိုင်ငံ တွင်ရောက်ရှိနေကြသော ရှမ်းမျိုးချစ်များတို့သည် ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ ပူတူးပလာဇာ၌ ၁၀၊၀၂၊၂၀၁၀ နေ့တွင် နံနက် ၁၀း၃၀မှစ၍ ထိုင်းဘုန်း တော်ကြီးကျောင်းတွင် ခေတ္တသီတင်းသုံးတော်မူသော ရှမ်းဘုန်းတော်ကြီးအား ပင့်ဖိတ်ကာ ဆွမ်းကပ် အလှူဒါနပြုခဲ့ပါသည်။
ထောင်တွင်း၌ကျခံနေရသော ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့်တကွ ရှမ်းခေါင်းဆောင်များ လွတ်မြောက် ရေးအတွက် အခမ်းအနား သို့တက်ရောက်လာသူများက အမွှေးတိုင်များထွန်းညှိပေးကြပြီး ဆုမွန်ကောင်းများ တောင်းပေးခဲ့ကြပါသည်။ ရှမ်းဘုန်းတော်ကြီးထံမှ ငါးပါးသီလကို ခံယူတည်ဆောက် ကြပြီးနောက် ဆရာတော်အားနေ့လည်ဆွမ်းကပ်လှူခဲ့ကြကာ ရောက်ရှိလာသူများအား ရှမ်း အစားအစာဖြင့် ကျွှေးမွှေးခဲ့ကြပါသည်။
ညနေပိုင်း ၆း၃၀တွင် ရှမ်းခရစ်ယာန်များတို့သည် စုဝေးကြပြီး ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် ရှမ်းခေါင်း ဆောင်များ လွှတ်မြောက် ရေးအတွက် အထူးဆု တောင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆုတောင်းပွဲ အခမ်းအနားတွင် စိုင်းလုံမှ အခမ်းအနားမှူးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး ဦးစွာသမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်ကို ဖတ်ကြား၍ အဖွင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စိုင်းထွန်းနေမှ ရောက်ရှိလာသော ခရစ်ယာန် ဓမ္မဆရာများ၊ ရှမ်းအဖွဲ့အစည်းမှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် လားဟူလူမျိုးများကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါသည်။
စိုင်းဆိုင်မှ ရောက်ရှိသူများအား ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားများကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ရောက်ရှိလာသူ အမေရိကန်လူမျိုး Ps. Ron Grosser ကလည်း ရှမ်းမျိုးချစ်တို့အား တိုက်တွန်းခွန်အားပေးစကားများကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စိုင်းကျော်နှင့်စိုင်းခမ်းနွမ်တို့လည်း ရှမ်းခေါင်းဆောင် များ၏ အထုပ္ပတ္တိအကျဉ်းကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
DSC00826ထို့နောက် Mr. Damian Loke ၏ အားပေးစကားကို ကြားနာခဲ့ရပြီးနောက် ရောက်ရှိလာ သူများ အားလုံးက မလေးရှားရောက် ရှမ်းလူမျိုးများ အားလုံးအတွက် ဆုတောင်းပဌနာပြုခဲ့ပါသည်။ Ps. Samuel Lone သည်လည်း ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် ရှမ်းခေါင်းဆောင်များအားလုံးလွှတ်မြောက်ရေး အတွက် အထူးဆုတောင်းပေးခဲ့ပါသည်။ Ps. Samuel Lone သည် ထပ်ဆင့်၍ သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိုက်တွန်းခွန်အားပေးစကားများကို ပြောကြားကာ ရှမ်းအစားအစာများဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံကာ အခမ်းအနား ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 4:15 AM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest